အရက်ဋီကာချဲ့ခြင်း – DVB
ဆရာဝန်ကြီးတယောက်က ဈေးကြီးပေးရတဲ့ အရက်ကောင်းဆိုရင် ကျန်းမာရေး ကောင်းသင့်သလောက် သောက်ပါလို့ ပြောထားတယ်။ ကျနော် ဆရာဝန်လေး (အသက်ငယ်လို့မဟုတ်ပါ) ဖြေပါမယ်။ ဈေးကြီးရင် ပစ္စည်းပိုကောင်းတဲ့ ဥပဒေသကတော့ အမှန်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အရက်၊ ရေမွှေး၊ ဂျူတီဖရီးက ရောင်းသမျှ။ ဈေးနည်းတာ သောက်ရလေလေ ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်နိုင်လေဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဘက်က တွက်ရင်တော့ အဆိုးလေးနဲ့ အဆိုးကြီးသာ ကွာပါတယ်။ အရက်ဆိုရင် ဟောင်းလေကောင်းလေ ဥပဒေသလည်း ရှိပါတယ်။ ၁၈ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ Macallan Old Sherry Wood Distilled 1980 Bottled 1998 700ml တပုလင်းကို ဒေါ်လာ ၁၁၀၀ ပေးရတယ်။ Scotch Whisky စကော့ခ်ျ ဝီစကီတွေက ဟောင်းရင် ဈေးကောင်းရတယ်။
၂၁ နှစ်သက်တမ်း Balvenie Portwood = $189.90
၁၇ နှစ်သက်တမ်း Balvenie = $129.90
၁၅ နှစ်သက်တမ်း Dalwhinnie Single Malt = $63.90
၁၂ နှစ်သက်တမ်း Cragganmore Single Malt = $59.95
၁၂ နှစ်သက်တမ်း Dewar's Special Reserve = $35.95
၁ဝ နှစ်သက်တမ်း Ardbeg = $49.95
၅ နှစ်သက်တမ်း Bench5Scotch Whisky = $23.55
၃ နှစ်သက်တမ်း House Of Stuart = $18.90
၃ နှစ်သက်တမ်း House of Stuart = $9.25
အရက်မှာ ဟောင်းတိုင်း ကောင်းသလားလို့ မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နာမည်ကြီး Chivas (ချီးဗတ်စ်) ကနေ သုတေသန လုပ်ထားပါတယ်။ သောက်သုံးသူ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ဟောင်းတာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ရောင်းတဲ့သူအကြိုက် အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရာနှုန်းထဲက ထောက်ပြတာကတော့ ဝီစကီထဲမှာပါတဲ့ Spirits (စပစ်ရစ်) အရက်ဟာ သိမ်းဆီးဖို့ ထားရတဲ့ Cask ထည့်စရာထဲမှာ ကြာလာရင် သစ်သားနဲ့ဓာတ်ပြုပြီး ပြောင်းလဲပျက်စီးလာမယ်တဲ့။ သူ့ထဲမှာ ချက်လုပ်ရာမှာပါတဲ့ အစေ့အဆံရဲ့အစွမ်းကို ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်တဲ့။ ဥပမာ Malt Scotch မော့လ် စကော့်ခ်ျ ထုတ်တာမှာသုံးတဲ့ ဘာလီစေ့။ ဥပမာပြရရင် မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်ထူထူကြီး လိမ်းသလိုပဲတဲ့။ အရက်အမျိုးမျိုးကို ချက်လုပ်ရာမှာ ဘယ်လို အစေ့အဆံတွေ သုံးသလဲ...
Bourbon whiskey 51% Corn (Maize) ပြောင်း-ပြောင်းဖူးစေ့၊
Corn whiskey 80% Corn ပြောင်းစေ့၊
Malt whiskey 51% Malted barley ဘာလီစေ့၊
Rye whiskey 51% Rye ရိုင်း-စပါးစေ့၊
Rye malt whiskey 51% Malted rye ရိုင်း-စပါးစေ့၊
Wheat whiskey 51% wheat ဂျုံစေ့၊
Beer (ဘီယာ) ကို Barley ဘာလီ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားအစေ့အဆံတွေကနေ ထုတ်တယ်။
Wine (ဝိုင်) ကို စပျစ်သီးကနေ အများဆုံးထုတ်တယ်။ တခြား အသီးတွေကနေလည်း ထုတ်သေးတယ်။
Vodka (ဗော့ဒဂါ) ကို အစေ့အဆံကို သိုးအောင်လုပ်ပြီးမှ ထုတ်ရတယ်။
Gin (ဂျင်န်) ကလည်း အဲလိုပဲ။
Cider (စီဒါ) ဆိုတဲ့ အမေရိကားနဲ့ ကနေဒါက အရက်ကို ပန်းသီးရည်ကနေ ထုတ်တယ်။
Scotch whiskies တွေက အနည်းဆုံး နှစ်ခါ (တချို့က အခါ ၂ဝ) ပေါင်းခံတယ်။ အစစ်သတ်မှတ်ချက်အရ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ထားရမယ်။ Oak casks (အုတ်သစ်သား) နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စည်ပိုင်းထဲမှာသာ ထားရမယ်။ ဘယ်လောက်ကြာပြီဆိုတာ မပါဘဲ ရောင်းမရဘူး။ Smoky flavor မီးသင်းထားတဲ့ အနံ့လေး ပါတာများတယ်။ Peat smoke သစ်ဆွေးမြေကို သုံးလေ့ရှိတယ်။ အရက်ကောင်းလို့ ယေဘုယျခေါ်ကြတဲ့ ဝီစကီကို တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း ထုတ်ပါတယ်။ (စကော့ခ်ျ) အစစ်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ အိန္ဒိယမှာ ဝီစကီကို Neutral spirits အရက်ပျံနဲ့ ရောထားတယ်။ ဒီဟာက သကြားထုတ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ ကြံ၊ စပျစ် စတာတွေကနေရတယ်။ အဲလိုထုတ်လုပ်တာက Rum (ရမ်) နဲ့ ပိုတူနေပါမယ်။ အရက်ထဲမှာ ဓာတုဗေဒအရ ဘာတွေပါသလဲ... အနံ့မွှေးဖို့ သုံးတာထဲမှာ (ကာဗွန်နိုင်းလ်) ဓာတ်ပေါင်း၊ (အယ်လ်ကိုဟော)၊ (ကာဘောက်ဆလစ် အက်စစ်)၊ (နိုက်ထရိုဂျင်) နဲ့ (ဆာလ်ဖါ) ဓာတ်ပေါင်းတွေ၊ (တဲနင်)၊ (တာပိုင်း)၊ (ပိုင်ရဒင်း)၊ (ပိုင်ရဇင်း) ဆိုတာတွေပါတယ်။ Oak အုတ်သစ်သား စည်ထဲမှာ ထားသိုရလို့ (အုတ်) နံ့ ရနေတယ်။ ဓာတ်ပေါင်းတွေပါမယ်။ Distillation ပေါင်းခံဖြစ်စဉ်ကနေ Fusel oils လောင်စာဆီ ပါတယ်။ သူက (အက်စနောလ်) ထက်ပိုပြီး အဆိပ်သဘောရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ပေါင်းခံတဲ့အခါမှာ မီးသွေး စတာတွေကို သုံးတတ်တယ်။ ဝီစကီကို အရောင်ပေးဖို့ သုံးတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေလည်း ပါနေတယ်။ အရက်အမျိုးမျိုးထဲမှာ အရက်ဘယ်လောက်ပါသလဲ ….
Pilsner ပေလ်စနာ = 3–6 %
Beers ဘီယာ = 3-10 %
Lager လက်ဂါဘီယာ = 4-5 %
IPA (Pale Ale) ပေးလ်-အေးလ် = 6-7 %
Sparkling Wine စပါကလင်-ဝိုင် = 8–12 %
Wine (general) ပုံမှန် ဝိုင် = 10–15 %
Madeira Wine မဒီရာ-ဝိုင် = 15-18 %
Bum Wine ဘမ်-ဝိုင် = 15-20 %
Port Wine ပို့တ်-ဝိုင် = 16-20 %
Fortified Wines ဝိုင်အပြင်း = 16–22 %
Sherry ရှယ်ရီ-ဝိုင် = 17–22 %
Cask Strength Whisky/Rum စည်သွပ် ဝီစကီ၊ ရမ် = 60 %
Vodka/Whiskey/Rum ဗော့ဒဂါ၊ ဝီစကီ၊ ရမ် = 40 %
Neutral Grain Spirits ချက်အရက် = 95 %
Rectified Spirits မီးတောက်အရက် = 96 %
မြန်မာပြည်ထွက်တွေကို ကွန်မင့်ကနေ တယောက်က ပြောပြလို့ မှတ်ထားတာရှိတယ်။ - မြန်မာ ရမ် = 45 % - မြန်မာ အာမီရမ် = 40 % - မြန်မာ ဘီအီး (အရက်ဖြူ ) = 30% Alcohol powder အရက်မှုန့် အရက်မှုန့်ကို ၂ဝ ဂရမ်ထုပ်တထုပ်ကို ၁-၁ ဒသမ ၅ ယူရို (၁ ဒသမ ၃၅-၂ ဒေါ်လာ) နဲ့ရောင်းတယ်။ အရက်ကို အမှုန့်လုပ်နည်းကို ယူအက်စ်မှာ ၁၉၆၉ ကတည်းက မူပိုင်ခွင့်ကို မှတ်ပုံတင်ထားတယ်။ လုပ်နည်းက အပူချိန် (-173.4° F) အထိ လျှော့ချရတယ်။ Palcohol ကို FDA က အသိအမှတ်ပြုပေးထားပါတယ်။ ရုရှားက နာမည်ကြီး ဗော်ဒကာအရက်ကိုလည်း Dry vodka အမှုန့်အနေနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ ၁။ Reconstituted ရေနဲ့ရောသောက်ရတယ်။ ၂။ Oral ဆေးတောင့်ပုံစံလုပ်ထားပြီး ဆေးသောက်သလို သောက်ရတယ်။ ၃။ Nebulizer ရှူဆေးနည်းနဲ့သုံးတယ်။ အရက်ဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေ တီထွင်ပြီး တွေ့သိလာတဲ့ အဆန်းထွင်မှုမဟုတ်ပါ။ အစားအသောက်နဲ့ အသီးအနှံတွေမှာ ပါနေတဲ့ သကြားဓာတ်က သဘာဝနည်းနဲ့ ကစော်ပေါက်တာကို အမှတ်မထင် သောက်သုံးရာကနေ တွေ့လာပါ။ အကောင်တွေ၊ ငှက်တွေက အဲလိုဟာကိုသောက်လို့ အမူအယာ ထူးခြားနေတာကို သတိထားမိတဲ့ တိရစ္ဆာန်အထိန်းတွေ၊ တောသူတောင်သားတွေကနေ စမ်းကြည့်ရာကနေ သောက်သုံးတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျောက်ခေတ်နှောင်းပိုင်းကာလ သက်တမ်းရှိတဲ့ ဘီယာခွက်နဲ့တူတာကိုလည်း တွေ့ရှိထားလို့ ဒီအယူအဆကို ခိုင်မာစေတယ်။ ဘီစီ ၁ဝဝဝဝ လို့ မှန်းပါတယ်။ အရက်အမယ်ပေါင်း ၂ ဒါဇင်လောက် ရေးပြီးပြီ၊ တာရှည် အရက်သောက်ရာကနေ ရစေနိုင်တဲ့ ရောဂါ ၁ ဒါဇင်တိတိ နာမည်လေးတွေပါ ပြောပါရစေ။
Cardiovascular disease နှလုံး-သွေးကြောရောဂါ၊
High blood pressure သွေးတိုးရောဂါ၊
Infectious disease ကူးစက်ရောဂါ၊
Nerve damage အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်း၊
အရက်ဈေးကြီးတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ သောက်နိုင်သူများခင်ဗျား၊ တပုလင်း ဒေါ်လာ ၂ဝ ကနေ ၁ဝဝဝ အကုန်ခံနိုင်တယ်ထားပါတော့၊ အသည်းရောဂါရလို့ အသည်းလဲရရင် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ မက ကုန်ကျပါမယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ